Tim Cook anowana muhoro wakapetwa, asi anotsvedza pasi runyorwa rwevakuru vanobhadharwa maCEO | Ndinobva mac
Mubhadharo waTim Cook wakapetwa kaviri asi pasi peiyo runyorwa rwevakuru vanobhadharwa maECO
Apple iri kubva pasimba kuenda pasimba. Nedambudziko repasirese ratange tirimo kwerinopfuura gore nekuda kwedenda rinofadza, uye Apple ichiwedzera zvikwereti zvakanyanya uye ine mabhenefiti akawanda. Uye izvo pasina mubvunzo zvinotenda kune manejimendi weayo CEO, Tim Cook.
Uye vanobatana navo vekambani, vachifara nebasa rave kuitwa naCook kwemakore mazhinji, havana kuzeza kumupa mubayiro, uye anenge kupeta mubhadharo wake zvichienzaniswa negore rapfuura. Asi nezvose izvo, akadonhedza nzvimbo dzinoverengeka mune chinzvimbo chevakuru vanobhadharwa kwazvo pasi rose. Kana Tim akabhadharwa zvakanaka, kuchine vanhu vari zvakanyanya ... kupenga, pasina mubvunzo.
Vhiki rino rondedzero FortuneGlobal 500 yakaburitsa kuti Apple yave iri kambani inobatsira kwazvo yegore rapfuura, ichiwana 57.000 mamirioni emadhora emabhenefiti muna2020, iine rekodhi yekutora yemamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemashanu emadhora. Pasina kupokana, nekutenda kune manejimendi weayo CEO, Tim Cook.
Uye zvingave sei zvimwe, vanobatana nekambani, vakafadzwa naCook, vakwidza muhoro wake. Panzvimbo pekuzviisa, ngatitii "akapetwa."
Elon Musk ndiye mukuru-anobhadharwa kwazvo CEO pasirese
Bloomberg chete post runyorwa rwako rwegore rwevakuru vepasi-vanobhadharwa zvakanyanya pasi rose. Uye zvinoshamisa kuti, kunyangwe Tim Cook akave nemari yake yakapetwa kaviri, yadonha kusvika pachisere pane iyo runyorwa. Chinzvimbo chinotungamirwa neMukuru weTesla, Elon musk.
Pane runyorwa rwegore rapfuura, Cook aive wechipiri-akabhadharwa-CEO aine $ 133,7 mamirioni muhoro kubva mubatanidzwa wemastock mibairo, muhoro uye mabhonasi. Muna 2020, nekutenda kune yakanaka accounting nhamba dzakawanikwa neApple, Cook akagamuchira pakati pemubhadharo nemabhonasi angangoita 265 mamiriyoni emadhora, zvakapetwa zvakapetwa zvegore rakapfuura.
Sekureva kwaBloomberg, CEO weApple akaunganidza mamirioni gumi nemazana manomwe emadhora, mazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora emadhora, mibairo yemamirioni matatu nemiriyoni yemadhora. Hapana kana chinhu. Asi zvirokwazvo, kunyangwe iri muhoro wekupenga, hapana chakaenzana neiyo 6.700 mamiriyoni madhora akaiswa naEron Musk muhomwe yake mu2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mubhadharo waTim Cook wakapetwa kaviri asi pasi peiyo runyorwa rwevakuru vanobhadharwa maECO
Uya Kubva Kure kweApple TV + inotangwa munaGunyana
Discount pane mamwe maJuuk tambo dzeApple Watch